Annaga - Yuyao City Linhui Plastic Hardware Warshada
YuYao Lin hui Caagagga Hardware Warshada waxaa la aasaasay 2006
YuYao Lin Hui Plastic Hardware Factory waxaa la aasaasay 2006. Waa shirkad casri ah oo ku takhasustay cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibinta iyo adeegga fiilada badbaadada whipcheck ee gaarka loo leeyahay, Whiplock, Whipblock, Xakamaynta Sock Sock, Tuubbada xajinta, Hose Hobbles, gariiradda guga lanyard, Silsiladda qaraxa dhuumaha, fiilada aan qarxin, Xarig birta birta ah, xadhig jiid birta birta ah, xadhig silig birta ah, Customization Product, Silsiladda Riging. Shirkaddu waxay leedahay koox naqshadeeye xirfad leh iyo hawl-wadeenno xirfad leh, oo leh awood farsamo oo xooggan. Alaabooyinka si wanaagsan ayaa loogu iibiyaa dhammaan gobollada iyo magaalooyinka dalka waxayna yihiin alaab-qeybiyeyaal muddo dheer ah shirkado caan ah.
Waqtigan xaadirka ah, warshadeena waxay leedahay 10 shaqaale, aaggu wuxuu ku saabsan yahay 1000 mitir cubic, kaas oo loo qaybiyay extrusion tube iyo workshop sawir silig, aqoon-is-weydaarsi rakibaad iyo qaabeynta, aqoon-is-weydaarsi xadhig goynta, iyo aqoon-is-weydaarsiga aluminium gacmo-gacmeed. Qalabku waxa uu leeyahay 6 tuubo oo mashiinada quudinta, 2 mashiinada quudinta xadhigga, 3 mashiinnada xadhigga jarista, 4 qalabka shaambada biyaha, iyo 2 qalab baakadaha. Waxay buuxin kartaa dhammaan shuruudahaaga habaynta xadhigga siliga.
Hadafkayagu waa "qof kastaa waa badbaado".Shirkaddu waxay u hoggaansantaa mabda'a "tayada marka hore, marka hore macmiilka"; Mabda'a daacadnimada, u hoggaansanaanta iyo adeegga tixgelinta leh, Istaraatiijiyadda horumarinta wax soo saarka ee "shakhsiyadda gaarka ah, tayada sare iyo qiimaha hoose"
Istaraatiijiyadda suuq-geynta ee "suuqgeynta farsamada iyo takhasuska adeegga" waxay ku guulaysteen kalsoonida iyo taageerada macaamiisha iyagoo siinaya adeeg tayo sare leh oo heer sare ah macaamiisha.